Nhau - maitiro ekumisikidza bamboo decking
maitiro ekuisa iyo yemishenjere
Kurema bamboo uriri kunonziwo bamboo sirika pasi. Yakagadzirwa nemhando yepamusoro yemishenjere uye yakamanikidzwa nezviuru zvematani emhando yepamusoro-yekumanikidza tekinoroji. Kusarudzwa kwemhando iyi yemapuranga pasi kwakanatswa kupfuura iyo yepasi pemishenjere. Iyo mhando nyowani yemishenjere yakaitwa nevanhu bhodhi, inotora senge senge mbishi uye inogadziriswa zvinoenderana nemaitiro ekugadzira maitiro ehuni hwakagadzirwazve. Kune mana epamusoro profiles eREBO bamboo decking:
1. MF021 / DF021: sandara pamusoro dhizaini
2. MF121 / DF121: diki wave guruva rakagadziriswa pamusoro dhizaini
3. MF321 / DF321: hombe wave yakavezwa pamusoro dhizaini
4. MF621 / DF621: diki groove pamusoro dhizaini
Vatengi vanogona kusarudza masitaera avanoda.
Kuti zvirinani kuisa yekunze bamboo decking, pane zvimwe zvinodiwa zvishandiso:
1. Joist:sechigadziko usati waisa iyo decking. Matanda, simbi, bamboo zvinhu, zvese zvakanaka, chero chaunoda.
2.Mapikicha uye Screws:Stainless simbi zvinhu. Zvekudhirowa clip, REBO inoratidza DC05 clip (iyo yekutanga mufananidzo), yakasimba mukubata, mukaha pakati pemabhodhi maviri anenge 6-7mm. Zvekutsikisa clip, iwe unogona kushandisa yedu DC06 (iyo yechipiri mufananidzo) yekutarisisa zvakanaka kuiswa.
4. Simbi Tepi
5. Chikamu cheMweya
6. Rubha Nyundo
7. Electric Screw Mutyairi
1. Usati waiswa, ndapota chengeta zvigadzirwa munzvimbo yakaoma uye ine mumvuri, dzivisa zuva uye mvura.
2. Usati wagadzwa, suka nzvimbo yekushandira, ita shuwa kuti izvo zvakakosha zvakatsiga uye zvakagadzikana, iyo drainage iri mushe uye inoenderana nezvinodiwa zvekugadzirwa kwekuvaka.
3. Iwo ma joists anofanirwa kuve akagadzika pane yakagadzikana simende-mabhuru kana samende-mataira. Ita shuwa yekucheka kutsetseka 1-2 madigiri kubva padanho kuitira kudurura mvura.
4. Daro pakati pejoists rinofanira kunge riri pakati pe450 kusvika 500mm. Neche padanda re1860mm kureba inoda min.5 joists.
5. Kureba kubva pasi kusvika pasi pekushongedza kunofanira kunge kuri 80-150mm.
Heano maInstallion Guilds ekutarisa:
1. Iyo yekumisikidza yekumisikidza: nzira mbiri dzeako mareferenzi
1) Minimum: Cement-tiles pasi pejoists
2) Nyanzvi: Shandisa zvakapetwa-marara joists pane samende-mataira ekureba-kwenguva kugadzikana
2. Musoro wakabatanidzwa: REBO bamboo decking yakagadzirirwa nerurimi uye groove musoro, saka mabhodhi maviri anogona kubatanidzwa pamwechete nyore nyore.
3.Siding Kuisa Nzira: Unogona kushandisa DC 06 kutanga uye kupedza. mabhodhi anogona kubatanidzwa pamwechete nyore nyore.
4.Kushongedza nematanho akaenzana mumativi maviri akareba anogona kugadziriswa pamwechete ne clip DC05 kune joists. Kureba pakati pebhodhi kunenge kwe6-7mm mushure mekumisikidzwa.
Pano vamwe vatengi vanozovhiringidzika nezve mukaha uri pakati pemabhodhi maviri. Sei paine panofanira kuve nekaipakati kadiki pakati pavo? Sekuzivikanwa kwedu, kwekushongedza kwekunze, pachave nekuwedzera uye shrinkage chiyero pasi pezuva uye nemvura, saka zvakafanira kusiya diki diki kuti mabhodhi akwane mamiriro akasiyana emamiriro ekunze.
Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu ~